Gramado मा सुझाव - ब्राजील - 1aviagem.com
ग्रैमाडोमा सुझावहरू - ब्राजिल
अघिल्लो पोष्ट: सिंगापुर र dollar०० डलर गम पछाडि रहस्य
अर्को पोष्ट: तपाईंलाई खोपहरूका बारे कुन कुरा जान्नु आवश्यक छ
पोष्ट गरिएको9जनवरी 20193समीक्षाहरू द्वारा रोमोमो लुकाना
आज हामी ब्राजील को दक्षिण मा यो आकर्षक शहर को बारे मा कुरा गर्नेछौं।
Gramado पोर्टो एलेग्रे देखि रियो ग्रैंडे डो सुल को राजधानी देखि केहि 120 किमी छ। र दुर्भाग्यवश शहरमा हवाई अड्डा छैन ...
त्यहाँ पुग्न तपाईं विमानबाट पोर्टो एलेग्रे (पीओए) बाट जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ बाट बस (R $ 32,00 लाई प्रत्यक्ष बस टर्मिनलबाट, पर्यटक बिना, यो सस्तो छ) वा कार्यकारी बस आर $ 53,60) बाट जानुहोस्। या टैक्सी देखि, यूबर देखि ग्रैमाडो। (पहिले नै मूल्यहरू माथि छन्)।
वा यदि तपाईंसँग केही गाउको साथीहरू छन् र तिनीहरू "ठिक" छन् भने उनीहरूले तपाईंलाई त्यहाँ पनि लिन सक्छन्! अनि यो सौभाग्य हाम्रो मामला थियो। (आई.ए.
3 Gauchos + 1 Candango घुसपैठ
ठीक छ, अब तपाईंलाई थाहा छ कि कसरी गम्मामा पुग्न को लागी, गरौं व्यापार गर्न तल।
Gramado मा के गर्ने?
1- मलाई लाग्छ कि पहिलो कुरा होटल खोज्न र चेक इन छ। hehe। (आई.ए.
सङ्केत रहन अग्रिम बुक गर्न को लागि, ग्रैमाडो सबै स्वाद र प्रकार को लागि छानिएको छ, तर यो एक पर्यटक शहर हो। त्यसैले, तपाईंले जोखिम तपाईं आइपुग्दा समय द्वारा होस्टिंग चिनो ... वा (शहर खचाखच भरिएको हुनेछ किनभने) बाहिर चलान, वा शहर देखि एक सानो थप रहन छ असफल भने। त्यसोभए, थप विकल्पहरू पाउनु र टिप तिर्नुहोस् होटल, होस्टल वा ह्यान्डल बुक गर्नुहोस्। त्यसकारण सम्भवतया ठाउँ छान्नुहोस्, बिना शोर, आदि।
2- एवेनाडा बोर्जेस डे मेडियर्स
यो लन को मुख्य बाटो त्यस्तो Kikito को मुर्ति (हामी यसलाई व्याख्या रूपमा), Joaquina रीता Bier लेक, कवर सडक, चर्च सेन्ट पीटर प्रेरित म्याट्रिक्स रूपमा ठाँउहरु को केन्द्र पुग्न दिन्छ मार्फत छ; क्रिसमसको लाइटको सन्दर्भ चकलेट, एवेनाडा बोर्जेस डी मेडियियोस सहित धेरै चकलेट र उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट। यो सुझाव पैदल मा हिड्न छ। ट्राफिक राम्रो तरिकाले congested हुन सक्छ र यसको लागि कुनै सुखद हिसाबले भन्दा पनि यसको कुनै पनि बिन्दु आइपुग्न धेरै लिन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, यो पैदल यात्राको लायक छ! (निस्सन्देह, पहिले ट्राफिक अवस्थाहरू जाँच गर्नुहोस्)।
3- कोर्टा स्ट्रीट र साओ पेडोरो चर्च भ्रमण गर्नुहोस्
आवरण सडक जहाँ पनि क्रिसमसको लाइट। यसमा केहि कोरल प्रस्तुतीकरणहरू छन्, र यो सम्भव छ कि धेरै राम्रो पसलहरू र रेस्त्राँ वरिपरिका चर्चित भेट्टाउन सकिन्छ।
चर्चको लागि, राम्ररी, यो विवाहको मागमा धेरै हुनुपर्दछ, पछि यो अनन्त प्रेमको स्रोत हो।
त्यहाँ पनि येशू ईनिरो पनि छ।
4- खाने, खाने र खाने
हो, यदि तपाईं लन जानुहुन्छ, खाना असजिलो हुने छैन।
चकलेटहरूसँग सुरु हुँदै, तपाईं चकलेटको राज्यमा जान सक्नुहुन्छ जुन यसले ब्राजिलमा घरको बनाएको चकलेट कसरी सुरु गर्यो। त्यसपछि तपाईं Lugano बाट प्रशोधन गर्न सक्नुहुन्छ, पनि प्रभर, फ्लोरिबल र यति बाट। एक तुलना गर्नुहोस्, फिर्ता आउनुहोस् र सर्वोत्तम को प्रश्न खाली गर्न फेरि खानुहोस्।
यसबाहेक रेस्टुरेन्टमा धेरै तातो बनाइएका खानाहरू छन्। यसको अर्थ भनेको तपाईं राम्रो खाने अनुभव हो, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धैर्य हुनुहोस्, केही समय लिनुहोस्, तर यो यसको लायक छ! यो राम्रो छ!
Eat Fondue। त्यहाँ फर्नेडीको फरक प्रकारको छ। यस मासुको कच्चा आउछ र तपाईं जुन चाहानुहुन्छ त्यो घट्छ, ढुङ्गामा बाँधिएको ढुङ्गामा। चकलेटमा डुबेको मात्र फलफूल फोनुडी पनि सम्भव छ।
अन्ततः, यो सबैभन्दा विविध विविधताबाट पनि आउँछ, यस पहाड क्षेत्र सबै भन्दा राम्रो छ कि यो प्रस्ताव पछि। र जीवन मनाउनुहोस्!
(यही कारणले म खाने, खाने र खाना खाएर, अब पछि तराजूबाट सावधान रहन्छ?)
5- मिनी संसार
यदि तपाईं मोक-अपहरू, मिडियाहरू र सानो गहना मनपराउनुहुन्छ, यो तपाईंको ठाउँ हो। मिनी-संसारमा ब्राजिलको धेरै देशहरू र भ्रमणहरूको माध्यमबाट यो "यात्रा" गर्न सम्भव छ। त्यहाँ तपाइँ जर्मन ट्रान्समिशन टावर, अस्ट्रियाई प्यालेस, जनरल मिना चर्च, बारिलोको एयरपोर्ट आदि देख्न सक्नुहुनेछ। 8 देशहरू प्रतिनिधित्व हुन्छन्। टिप निर्देशित भ्रमणको लागि पर्खनु हो। केही चीजहरू छन् जुन केवल एक प्रशिक्षित आँखाले देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, सानो राजकुमार र फ्याक्स (बारिलोको हवाईअर्टल नजिक) डार्थ वडर र सिनेमा वरिपरि तारा वार्सको कर्मचारी। तिनको साथ Chaves को गाँउ Quico र Chiquinha को एक वर्ग मा। सानो मोडेलहरू र तिनीहरूका बचपनको सम्झना हेर्न निकै राम्रो छ। गंभीरतापूर्वक, यो यसको लायक छ। पछि म मिनी वर्ल्डको बारेमा एक पोष्ट गर्नेछु, म प्रतिज्ञा गर्छु!
6- ब्ल्याक लेक
कालो झील एक ग्रैमाडो पार्क हो जुन प्रवेश प्रवेश नि: शुल्क छ र हिड्न निकै सुन्दर छ। हाइड्रगान्डा र तालले सुन्दरताको हावा दिन्छ। यो एक पेडल नाका भाडा र ताल भित्र टहल गर्न सम्भव छ। R $ 40,00 को लागि जोडाले सानो पेडल डुङ्गामा चढ्न सक्छ। 180 किग्राले दुवैको वजन थप्यो।
फ्ली गुला उज्यालो
तर यदि तपाईं पहिले नै अतिधेरै हुनुहुन्छ र तपाईं अलि बढी थोरै वजनको कारणले भरपर्दो र ओभरटाइम खानाको लागि तपाईंलाई पेडल डुङ्गा सवारी गर्न केहि अतिरिक्त तिर्न को लागी हुन सक्छ। माथि 180 किग जोडिएको जोडा (+ वा - 90 किलो प्रत्येकका लागि) R $ 50,00 लाई भुक्तानी गरिन्छ। हो, अधिक प्रबलित पेडल डुङ्गा (जसलाई ठूलो ठूलो समर्थन गर्दछ) को लागी यो जहाजको जहाजबाट बचाउँछ!
तर मैले मात्र औपनिवेशिक कफी खाएँ
र यदि तपाईं एक परिवार संग वा मित्र साथीको साथ जानुहुन्छ भने, पेडल डुङ्गा चयन गर्ने बारे सोच्नुहोस्, सुझाव भनेको सबैभन्दा ठूलो एक छान्नु हो। खैर, तपाईं एक हो जसले टाइटैनिक दृश्य जान्दछ जुन तपाईं ग्रुमाडोमा प्ले गर्न चाहानुहुन्छ। hehe।
7- भाप विश्व
ईमानदार हुन, मेरो यो आकर्षणमा जाने समय थिएन, तर त्यसो भए पनि म यसलाई उल्लेख गर्न असफल हुन सक्दिन।
यो ठाउँ हो जुन भाप इन्जिनको इतिहासलाई उर्बनी परिवारको विरासतमा थपिन्छ। विचार कला र आन्दोलनको साथ भाप संसारको बारेमा बताउनु हो। साइट लागतको लागि टिकट R $ 68,00। म यहाँ लिङ्क छोड्छु जो कोही भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ।
8- थिएटर थियेटर भ्रमण गर्नुहोस्
यो जहाँ ग्रैमेरा चलचित्र उत्सवबाट आउछ, जहाँ उनी किकिटो डेलिभर गर्छन् (जुन ब्राजिलका ओस्करको बराबर हुनेछ।
यो होइन, तर यो एक!
Kikito = Oscar de Gramado
किकिटो एलिलीबेथ रोजेनफेलको निर्माण हो र राम्रो हास्यको देवतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। Gramado फिलिम फेस्टिवलको पहिलो संस्करणको रूपमा उनी उनको प्रतीक छनौट गरे।
फोटोबाट यो एक जोडे एलिसेबेथ र कर्ट द्वारा उपहारको रूपमा दिइएको थियो
9- दालचीनी भ्रमण गर्नुहोस्।
नजिकैको शहर ग्रैमाडोबाट मात्र7किलोमिटर छ, तर यो पोष्ट धेरै ठूलो हुँदैछ, मैले भविष्यमा दालमोनको बारेमा लेख्न छोड्छु।
एक गले र अझ बढी! (आई.ए.
कसरी बोर्जेस डी मेडियियोस ब्राजिल canela खानुहोस् Gramado kikito कालो पोखरी मिनी संसार भाप संसार क्रिसमसको लाइट रियो ग्रान्ड Sul के आवरण सडक सेन्ट पीटर
3 टिप्पणी	टिप्पणी छोड्नुहोस् >
जनवरी9देखि 2019 सम्म 21: 22
जनवरी 10 देखि 2019 सम्म 08: 50
जनवरी 19 देखि 2019 सम्म 20: 29
र कसले भन्यो कि तपाईं # ट्रिप सक्नुहुन्न? कसले # ट्रेवल र # ​​पढ्ने सुझाव पढ्छ1aviagem.com बाहेक अरु कोही हुन सक्दैन "जुले भेर्नको 80० दिनहरुमा संसारभर। त्यहाँ # क्रियाकलाप छ त्यहाँ # अप्रत्याशित # कार्य हो र यो लगभग # डेमोरेसनको अन्तिम म्याद हो" कुरान्नन अन्य पढ्ने सुझावहरु यसमा छन्। 1aviagem.com #fiqueemcasa #leia #travel #stayAtHome #read #travelthroughheworld
मलाई हेर्नुहोस् # आँखाहरूमा म आक्रमण गर्न लागिरहेको छु! # क्याट # प्ले गर्दै उनीहरू #loveit
# ब्राजिलिया # ब्राजिलिया #1aviagem 1aviagem.com